एनएसडीमा विद्यार्थी बन्न नपाएका मनोज बाजपेयीकाे संघर्षको कथा
Thursday, October 21, 2021 |बिहीबार, कात्तिक ४, २०७८
जनतापाटी आइतबार, भदौ १३, २०७८ मा प्रकाशित
एजेन्सी । आफूले पाएको भूमिकालाई न्याय गर्ने कमै कलाकार छन्, जसमध्येका एक हुन् मनोज बाजपेयी । पछिल्लो समय एकपछि अर्को फिल्ममा आफ्नो अभिनयको जादू छर्दै अगाडि बढिरहेका मनोजको लागि यो नाम बनाउन सहज भने थिएन । उनले यसका लागि निकै संघर्ष गरेका छन् । मध्यम वर्गीय किसान परिवारका छोरा थिए, मनोज । उनलाई पिताले डाक्टर बनाउन चाहन्थे ।
उनको पिताकै सपना थियो डाक्टर बन्ने । तर, उक्त समयमा भर्ना गर्न पैसा नभएपछि अधुरो रहेको आफ्नो सपना छोरालाई डाक्टर बनाएर पूरा गर्न चाहन्थे । त्यसैले मनोजमाथि पिताले त्यो सपना पूरा गर्ने दायित्व सुम्पिएका थिए । यद्यपि, मनोज भने चिकित्सा पेसामाभन्दा अभिनयतर्फ आकर्षित थिए । सानैदेखि फिल्मको पर्दामा देखिन्छु भन्ने सोचेका निकै शान्त स्वभावका मनोजको मनोबल बढाउने काम स्कुलमा भयो ।
‘एकपटक स्कुलमा एउटा इभेन्ट थियो । त्यसैले क्लासमा आएर शिक्षकले कसले सहभागिता जनाउने भनेर सोध्नु भयो । त्यहाँ कोही नबोलेपछि शिक्षक आफैँले मलाई हरिवंश राजजीको कविता ‘जो बित गई, वो बात गई’ हरेक दिन क्लासमा सुनाउनु भन्नु भयो । उक्त इभेन्ट नआउँदासम्म मैले हरेक दिन त्यो कविता क्लासमा सुनाएँ’ मनोजले भने । यसरी उनको अभिनय वा प्रस्तुतीको यात्रा सुरु भयो ।
अभिनयमा आफूलाई देखिरहेका मनोजले नेसनल स्कुल अफ ड्रामाकोबारेमा थाहा पाए । उनले अभिनेता नसिरुद्दीन साहको एक अन्तर्वार्ता पढेका थिए । जहाँ एनएसडीकोबारेमा लेखिएको थियो । त्यति मात्र होइन राज बब्बर, ओम पुरीलगायतका केही कलाकारको अन्तर्वार्ता पनि एनएसडीकै कुरा गरिएको थियो । त्यसपछि मनोजलाई लाग्यो कि अभिनेता बन्नु छ भने त्यहाँ गएर सिक्नै पर्छ । यद्यपि, त्यो उनको लागि सहज भने थिएन ।
‘म कक्षा ५ मा पढ्दा नै दिल्ली जाने योजना बनाएको थिएँ, किनकि मलाई ग्राजुएसनपछि एनएसडीमा पुग्नु थियो’, मनोजले भने । कक्षा १२ पास गरेपछि मनोजले पनि दिल्ली जाने तयारी गर्न थाले । तर, उनलाई सहज भने थिएन । उनले आफैँसँग कक्षा चारदेखिकै स्कुले साथीसँग सहयोग मागे ।
टिकट नभए पनि लागे दिल्ली, उनलाई त्यहाँ पुग्नु नै थियो । ‘म सँग टिकेट थिएन । त्यसैले चेक गर्न आउँदा अर्को डब्बामा जान्थे । अन्तिम डब्बाबाट स्टेसनमा रोक्दा फेरि आफ्नो डब्बामा फर्किन्थेँ । यसरी दिल्ली पुगेको थिए’, मनोजले भने । यति दुःख गरेर दिल्ली पुग्दै गरेका मनोजले आइटीयो पुलबाट दिल्ली नियाल्दै आफ्नो पोस्टर सहरमा हुने प्रण गरे ।
दिल्ली युनिभर्सिटीमा तीन वर्ष अध्ययन गर्दा उनले ‘स्ट्रीट थियटर’ पनि आवद्ध भए, किनकि उनको चाहना त यहि थियो । यद्यपि, उनलाई एनएसडीमा पुग्नु थियो, त्यहाँ अभिनय सिक्नु थियो । उनी त्यहीअनुरुप गए एनएसडी, तर त्यहाँ उनको सेलेक्सन भएन । ‘म त्यो दिन निकै रोएँ । मेरो सपना टुटेको थियो । एनएडडीबाट रिजेक्ट भएपछि म यतिसम्म निराश भएको थिएँ कि एक जना साथी मसँगै हुन्थे, किनकि मैले आत्महत्या गर्छु कि भन्ने डर थियो साथीहरुलाई’, मनोजले पुरानो समय सम्झिए ।
त्यसपछि उनलाई एक साथीले सुझाए, थियटर वर्कसप गर्न । ‘मैले एक सम्भव ग्रुपकाबारेमा थाहा पाएँ, जहाँ एनएसडीका धेरै थिए । त्यसपछि मैले त्यहाँ वर्कसप गर्ने निर्णयका साथ अगाडि बढे । तीन सय ६५ दिनको थियटर गर्न मसँग पैसा पनि थिएन । एक साथीले दुई हजार दिएपछि मैले त्यहाँ एडमिसन गराएँ’ मनोजले भने ।
उनले त्यहाँ तीन सय ६४ दिन सहभागिता जनाए । त्यो देखेर सबै चकित थिए । उनी यतिसम्म लगनशील थिए, त्यसपछि उनी पुनः एनएसडी गए । वर्कसपको दौरानमा पाएको प्रतिक्रियाले मनोजमा केही उत्साह थपेको थियो । यद्यपि, यसपटक पनि उनले एडमिसन पाएनन् । एनएसडीको शिक्षकहरुसँग थियटर पनि गरेपछि उनी चकित बने ।
‘म आफैँले बुझ्न सकिरहेको थिइँन् कि म कहाँ गलत छु रु किन मेरो सेलेक्सन भइरहेको छैन रु मैले त्यो अझै बुझ्न सकेको छैन’, मनोजले कहीँ कतैबाट जवाफ पाएनन् । दोस्रोपटक एनएसडी प्रवेशमा फेल भएका मनोजले ब्यारी जोनसँग काम गर्ने अवसर पाए । प्रायः अंग्रेजी थियटर गर्ने ब्यारीले हिन्दी गर्न लागेका थिए, जहाँ मनोज चयन भए ।
‘मलाई जोनले एसिस्ट गर्न अफर गरे । त्यसका लागि मैले एक हजार पाँच रुपैयाँ पाउँथेँ भने, उनले एनएसडीको लागि तयारी पनि गराउने बताएका थिए’, स्मरण गर्दै मनोज भन्छन्, ‘त्यसपछि मैले त्यहाँ काम गर्न थालेँ । उनले केही पुस्तक पनि दिए पढ्नलाई ।’ त्यसपछि मनोज तेस्रोपटक एनएसडी पुगे, एडमिसनको लागि । त्यतिबेलासम्म मनोज दिल्लीको थियटरमा परिचित नाम बनिसकेका थिए ।
तर, पनि उनलाई एनएसडीमा पढ्नु नै थियो, उनको यो बाल्यकालदेखिकै सपना थियो । ‘तेस्रोपटक पुग्दा मैले गरेको अभिनयमा सबै खुसी भए र मलाई सोधे एनएसडी नै किन ? मैले भनेँ म अरुसबै छाडेर केवल अभिनयमा फोकस गर्न चाहन्छु र यो प्रशिक्षण बाहिर पाइँदैन । तीन वर्षसम्म म अन्य कुरा छाडेर अभिनय मात्र बुझ्न चाहन्छु’, मनोजले भने । तर, यसपटक पनि उनको एडमिसन भएन । यद्यपि, उनलाई त्यहाँ शिक्षक बन्ने प्रस्ताव आयो । बाल्यकालदेखि बोकेको सपना पूरा नहुँदा जति दुःखी थिए मनोज, त्यति नै शिक्षक बन्न आएको प्रस्तावले खुसी पनि । त्यसपछि उनले पितालाई पत्रमार्फत आफू डाक्टर बन्न नसक्ने जानकारी दिए ।
अभिनय यात्रामा निस्किएका मनोजलाई सहज भने थिएन, उनको बलिउडमा चिनजान कोही थिएनन् । उनले जे गर्नु थियो, आफ्नै दममा गर्नु थियो । उनलाई एक दिन तिंगमांशु धुलियाले शेखर कपूरले बोलाएको भन्दै लिन आए । ‘पहिला त मलाई मजाक लाग्यो, मेरो स्ट्रगल चलिरहेको थियो । तर, पछि उनलाई भेट्न गएँ । त्यहाँ मलाई ब्याण्डिट क्विनमा विक्रम मल्लाहको भूमिका दिइयो’ मनोजले सम्झिए । तर, त्यो रोल निर्मल पाण्डेलाई दिइयो । किनकि शेखरको पहिलो रोजाई नै निर्मल नै थिए । निर्मल लण्डन गएकोले मनोजलाई बोलाइएको रहेछ । त्यसपछि मनोज थियटर गर्न नै कलकत्ता पुगे ।
‘त्यहाँ मलाई फोन आयो तिंगमांशुको र उनले मलाई तत्कालै दिल्ली बोलाए । यही फिल्मको मान सिंहको क्यारेक्टरलाई नसिरुद्दीनले छाडेका थिए, जुन मलाई दिइयो’, मनोजले आफू निकै खुसी भएको बताए । उक्त फिल्मपछि शेखरकै सल्लाहमा मनोज दिल्लीबाट मुम्बई पुगे । त्यहाँ उनलाई सुरुवाती दिन झनै कठिन भयो, त्यहाँ थियटर पनि गर्न सकिरहेका थिएनन् । दिल्लीमा बनाएको आफ्नो रिलेशन छाडेर उनी मुम्बई पुगेका थिए । उनले त्यहाँ सन् १९९३ देखि १९९७ सम्म संघर्ष गरे ।
संघर्षकै क्रममा एक सिरियलमा कम गर्ने अवसर मिल्यो । तर, फस्ट टेकमै उनलाई अभिनय नराम्रो गरेको भन्दै निकालियो । ‘त्यहाँ साथ दिने कोही थिएनन्, निकै दुःख सहनु पर्‍यो, त्यो चार वर्ष’, मनोजले भने । त्यसपछि उनले ‘स्वाभिमान’ सिरियलमा काम गर्ने अवसर पाए । १० एपिसोडको लागि भनेर उनलाई काम गराइयो । ‘मेरो पहिलो एपिसोड हेरेरै महेश भट्टले मलाई हतास नहुन भने । सबैको अगाडि उनले मलाई राम्रो अभिनेता भन्दै मुम्बई नछाड्न सल्लाह दिए, मनोजले त्यसलाई हौसलाको रुपमा लिन्छन् ।
त्यसपछि मनोजले धेरै एपिसोडसम्म सिरियलमा काम गरे । त्यहिँक्रममा उनले राम गोपाल बर्माको ‘दौड’ फिल्मको एक क्यारेक्टरको लागि सेटमा पुगे । त्यहाँ राम गोपालले मनोजलाई तिमीले के गरेका छौ भनेर सोधे । मनोजले आफूले मान सिंहको क्यारेक्टर गरेको बताए । त्यसपछि राम गोपाल चकित भए । ‘उहाँले मलाई यो फिल्म नगर म अर्कै फिल्म बनाउँछु, त्यो पनि तिमीलाई लिएर भन्नु भयो । तर, मलाई पैसाको लागि पनि फिल्म गर्नु थियो । त्यसैले दौडमा सानो भूमिका निर्वाह गरे’, मनोजले भने । दौडपछि राम गोपालले मनोजलाई लिएर ‘सत्या’ फिल्म बनाए । त्यो फिल्मले मनोजको करियरलाई गन्तव्य नजिक पुर्‍यायो । त्यसपछि उनले संघर्षका दिनलाई बिदाइ गरे । यस्तै संघर्षलाई पार गर्दै मनोजले आज यो नाम बनाउन सफल भएका छन् ।
कालीगण्डकी किनारमा दुई पुरुषको शव फेला १ घण्टा पहिले
कुशवाहामाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कडा कारवाहीको माग १ घण्टा पहिले
महिला मेयर कपः गोदावरीविरुद्ध कन्काईको दर्जन गोल १ घण्टा पहिले
शाहरुख खान र अनन्या पाण्डेको घरमा एनसीबीको छापा
शाहरुख खानका छोराकाे सुनुवाइ २६ अक्टोबरमा हुने
आर्यनकाे बारेमा किन बोलेनन् आमिर, अजय र अक्षय ?
करिश्माले भेटिन् ओलीलाई
यी हुन् अनमोलले साइन गरेर छोडेका फिल्म